सेयर शिक्षा : ‘ बजारमा टिक्ने हो भने अध्ययन गर्नुस्, सिरक जत्रो छ त्यति खुट्टा पसार्नुस्’ Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
सेयर शिक्षा : ‘ बजारमा टिक्ने हो भने अध्ययन गर्नुस्, सिरक जत्रो छ त्यति खुट्टा पसार्नुस्’
यदि कुनै लगानी कर्ताले एक करोड लगानी गरेको छ भने ६० लाख रुपैयाँ राम्रो राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने। र ४० प्रतिशत भने किनबेच गरी रहने। त्यो ४० प्रतिशतले भने आफूलाई आवश्यक पर्ने खर्च टार्न पुग्छ। यो पैसा दैनिक ट्रान्जेक्सन गर्यो भने प्रोफिट बुक पनि हुन्छ
ठिक एक वर्ष अगाडि। चैत्र महिनामा कोभिडको कारण पुजी बजार लकडाउन भयो। त्यो बेला ५ हजारले अनलाइन सुविधा लिएका थिए। त्यसमा पनि अनलाइनको सुविधा लिने १ प्रतिशत मात्र थियो।
एकाएक लकडाउन भएपछि नेप्सेले अनलाइनबाटै काम गर्ने भनिदियो। तर ब्रोकरहरू पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे।। मर्चेन्ट बैङ्किङले काम गर्न नसक्ने भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। हामी लगानीकर्ता भने अलमलमा पर्यौँ। चैत्र ९ गते नेप्सेमा गयौ।
त्यति बेल एक प्रतिशतले पनि अनलाइन सुविधा नलिएको कारण बजार बन्द गर्नुपर्छ भनेर नेप्सेमा पुगेका थियौ। एक प्रतिशतले मात्र कारोबार गरे भने निष्पक्ष कारोबार कसरी हुन्छ भन्दा नेप्सेले मानेन र दुई दिन जबरजस्ती बजार खोल्यो।
त्यो दुई दिनमा जम्मा ४ करोडको कारोबार भयो। लगानीकर्ताले ६८ अर्ब गुमाए। त्यसपछि नेप्सेमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा भन्यौ। बल्ल नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन)ले हाम्रो कुरा सुनेर बजार बन्द गर्‍यो।
हामीले दुई चार दिनको लागि बन्द होला भन्ठानेको त ५० दिन सम्म लम्बियो। त्यो बन्दले नेप्सेको बेइज्जत नै भयो। नेप्सेले अनलाइनको बारेमा बढो फुर्ती गर्थ्यो। अनलाइनमा जहिले पनि समस्या आउने भएपछि नेप्सेको बेइज्जत भयो।
बाइकोलाई पनि समस्या भयो। त्यस पछि बाइको र नेप्सेलाई अर्थ मन्त्रालयले बोलायो र सेबोनले कडाइ गरे पछि मात्रै अनलाइनमा सुधार भयो।
कोरोना सङ्क्रमण हुन लागे पछि अब त खोलौँ भनेर धितो पत्र बोर्ड र लगानीकर्ता बसेर कुरा गरे पछि बजार खुल्यो।
सुरुमा बजार केही घटे पनि अनलाइन कारोबार गर्न आइडी पासवर्ड लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्यो। त्यो ५० दिनको बन्द हामी लगानी कर्ताहरूको तपस्याको क्षण थियो। केहीले त हामीलाई बजार बन्द गरेर हिँड्ने नेताहरू नै भन्न भ्याए। त्यो बेला ५ वटा लगानीकर्ताको सङ्गठनलाई मैले नै नेतृत्व गरेको थिए।
त्यसैले मलाई नै पनि डर धम्की नआएको हैन। अझ मिडियामा गाली गर्ने त कति हो कति। त्यो बेला त हामीले पनि त सेयर किन्न पाएनौ।
त्यो बेला कनेक्ट आइपिएस थिएन। कनेक्ट आइपिएस जम्मा ५ लाख ६ हजारले चलाउने गरेका थिए। त्यसमा पनि एक दुई हजारले मात्र सेयर किन्न प्रयोग गर्ने गर्थे। ४ करोडको कारोबार दुई दिनमा भयो। ६८ अर्ब रुपैयाँ पुजी गुमाएको त्यो दिन पुजी बजारको कालो दिन हो।
लकडाउनमा शेयर बजारप्रतिको आकर्षण नेपालमा मात्र हैन, विश्व भरी नै भएको हो। शेयर बजार प्रतिको आकर्षणले नै सरकारले राजस्व पनि पायो। सेबोन, सिडिएस र ब्रोकरले पनि कमिसन पाए। बजारमा छरिएर रहेको पैसा पुजी बजारमा चलायमान पनि भयो।
पहिलो लकडाउन पछि लड्दै, उठ्दै बजार अगाडि बढ्यो। त्यसको फलस्वरूप आज अनलाइनको सुधार भयो। सबैतिरबाट भएको सुधारको कारण घरमा नै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था भएको छ अहिले।
आजको दिनमा ९० प्रतिशत भन्दा धेरै कारोबार भइरहेको छ। यो मात्र हैन विदेशमा बस्ने एनआरएनले पनि आफन्तको नामबाट लगानी गर्न पाएका छन्। त्यस बाहेक ६० लाखको हाराहारीमा विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले रेमीट्यान्स मात्रै पठाउनुको अलावा अनलाइनबाट सेयर किनबेच गरी रहेका छन्।
विदेशमा पसिना बगाएका उनीहरू सँग १० खर्व भन्दा धेरै रकम छ। अनलाइनको कारण आफ्नै नाममा डिम्याट एकाउन्ट खोलेर कनेक्ट आइपिएस मार्फत पैसा तिरेर खाडीमा नै बसेर सेयर किनबेच गरी रहेका छन्।
त्यस कारण त बजार १० खर्वको पुगेको हो। मलाई लाग्छ, यो २०७८ साल भित्रै १५ अर्ब देखि २० अर्बको कारोबार हुन्छ।
अहिले महिनाको डेढ दुई लाख डिम्याट खाता बढ्दै गएको छ। यो आइपीओले गर्दा भएको पनि होला। बैकमा खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।
२७ सय ६५ अङ्कसम्म बजार पुग्यो। अहिले केही झरेको भए पनि बजार माथि नै जाने देखिन्छ।
पोहोरको लकडाउनमा सबै व्यवसाय थला परे। अहिले कनेक्ट आइपिएस भएको हुनाले घरमा नै बसेर कारोबार गर्न सक्ने अवस्था आएको छ।
लकडाउनमा शेयर बजारप्रतिको आकर्षण नेपालमा मात्र हैन, विश्व भरी नै भएको छ। शेयर बजारप्रतिको आकर्षणले नै शेयर बजार २७ सय ६५ पुगेको हो। शेयर बजार प्रतिको आकर्षणले नै सरकारले राजस्व पनि पायो। सेबोन, सिडिएस र ब्रोकरले पनि कमिसन पाए। बजारमा छरिएर रहेको पैसा पुजी बजारमा चलायमान पनि भयो।
अहिले बैकमा पैसा फालाफाल हुन्थ्यो। आजको दिनमा शेयर लगानीकर्ताहरूले बैङ्कबाट त्यत्रा पैसा नलिएको भए बैङ्कको हालत खराब हुन्थ्यो। लगानीकर्ताले ८–९ प्रतिशतमा लिएर लगानी गरेकाले बैकलाई पनि ठुलो टेवा पुगेको देखिन्छ।
त्यसैले अहिले नेपालको पुजी बजार बढेर ३८–३९ अर्बको भएको छ। यो राष्ट्रको जिडिपी बराबर हो। हेर्नुहोस् अबको २, ३ वर्षमा पुजी बजारले देशको जिडिपीलाई उछिन्छ।
पहिले गाली, अहिले तारिफ
कुनै देशको आर्थिक अवस्था हेर्न त्यहाँको पुजी बजार हेरे पुग्छ भनिन्छ। भारत, जापान, युके, अमेरिका जहाँसुकै हेर्नुहोस्, त्यहाँको पुजी बजारको अवस्था राम्रो छ।
कोरोनाको बेलामा हामी लगानीकर्ताले नै एकजुट भएर कमिसन कम गरायौ। पहिले हामीले बजार बन्द गरेको भन्दै गाली गर्नेहरू नै अहिले हाम्रो तारिफ गर्न लागेका छन्।
अहिले शेयर बजारले २७ सय ६५ को नयाँ हाइट लिएको छ। यो उचाइ कायम हुन्छ कि हुँदैन । नयाँ लगानी कर्ताले यो समयमा लगानी गर्ने कि नगर्ने ? यो समय शेयर बजारमा छिर्ने समय हो कि हैन ? यो बजार क्रयास हुन्छ कि? बजार धेरै बढ्यो, फेरी घट्ने हो कि भन्ने विभिन्न शङ्का उपशङ्का नयाँ लगानी कर्तामा छ। यो शङ्का आइपिओ भर्नेमा छैन। आइपिओ भर्नेहरूलाई त एक सय लगानी गरेर पाँच सय भन्दा धेरै फाइदा भई हाल्छ।
अहिले कति सेयरहरू अन्डर प्राइस छन्। त्यसैले यो समय नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने समय हो। तर यस्तो बढेको समयमा जुनसुकै सेयर भने किन्ने हैन।
सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्न चाहने लगानी कर्ता दुबिधामा देखिन्छन्।
यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने आज भन्दा साढे चार वर्ष अगाडि १८ सय ८१ को विन्दु नै उच्च विन्दु थियो। तर त्यो बेला जीएफआई आजको मूल्य भन्दा बढी थियो। त्यो बेला हाइड्रोपावरको मूल्य एकदमै कम थियो।
बैङ्कको पनि खासै बढेको छैन। लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि अवस्था उस्तै छ। दश–बाह्र वटा कम्पनीको भाउ बढेर यो आठ, नौ सय पोइन्ट बढेको हो।
त्यसले डेढ दुई सय पोइन्ट बढाएको छ। त्यस्तै निफ्राले ८८ पोइन्ट बढाएको छ। एनएलआइसी, साल्ट ट्रेडिङ,हिमालयन डिस्टिलरी, चन्द्रागिरि लगायत लगायतका नयाँ कम्पनीले हजार पोइन्ट बढाएका छन्। त्यसै त्यो बेलाको रेट अहिलेको भन्दा अझै महँगो थियो।
अहिले पनि ४००– ४५० मा २५ वर्ष पुरानो बैकको सेयर किन्न पाइन्छ। सिभिल बैक त २ सय ३० मा नै पाइन्छ।
सेयरको मूल्य खासै नबढे पनि अहिले बजार ठुलो भएकोले मानिसको शेयर बजारमा आँखामा परेको हो। हामीले टेक्नीकल्ली हेर्न सक्नुपर्छ। अहिले कति सेयरहरू अन्डर प्राइस छन्। त्यसैले यो समय नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने समय हो। तर यस्तो बढेको समयमा जुनसुकै सेयर भने किन्ने हैन।
किन भने यो समय कमजोर कम्पनीहरूको पनि भाउ माथि गएको हुन सक्छ। पेमेन्ट, बोनस, डिभिडेन्ट नदिनेहरूको मूल्य पनि बढेको हुन सक्छ।
उदाहरणको लागि विशाल बजार। उसले एजिएम नै गरेको छैन। उसले अहिलेसम्म बोनस पनि दिएको छैन। थितोपत्र बोर्डबाट केही समय कारोबार रोकेर कारबाही नै ग¥यो। महिनौँ दिन कारोबार रोकेको उक्त कम्पनीको अहिले सर्किट लागिरहेको छ। म चाहिँ त्यस्तो शेयर किन्दिन। किन लगानी कर्ता त्यहाँ झुम्मिएको थाहा छैन।
आफ्नो सिरक हेरेर खुट्टा पसार्नु पर्छ
नयाँ लगानीकर्ताले आफ्नो सिरक हेरेर खुट्टा पसार्नु पर्छ। अर्थात आफ्नो क्षमता हेरेर लगानी गर्नु पर्छ। बैक, माइक्रो फाइनान्स, लाइफ–नन लाइफ बिमा कम्पनी, हाइड्रोपावरको सम्भावना राम्रो छ। जब सम्म एकल अङ्कमा व्याज रेट हुन्छ तब सम्म पुजी बजार बढिरहन्छ।
सुधारको कार्यक्रम नेप्से, सेबोन,सिडियस, राष्ट्र बैक, बिमा समिति सबैले गरेका छन्। अहिले जुन सुकै अर्थ मन्त्री, र प्रधानमन्त्री आए पनि पुजी बजारलाई वक्र दृष्टिले हेर्दैनन्।
विगतमा भएका गल्तीहरूले नेतृत्वले पनि सिक्दै छ। अहिले बल्ल पुजी बजारलाई बुझ्न थालिएको जस्तो लाग्छ।
पुजी बजार निकै नै सेन्सेटिभ हुन्छ। अलि कति गल्ती भयो भने भोलिपल्ट बजार घट्ने हुन्छ। नबुझेको कारण मानिसले त अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै पैसा गयो समेत भनेका छन्।
पुँजी बजारमा अहिले ८० अर्ब ऋण गएको छ। राष्ट्र बैकको नियम अनुसार २ अर्ब भन्दा धेरै ऋण पाउँछ।
यो कोरोनाको बेलामा गृहिणी, विद्यार्थी, साना व्यापारी, सरकारी कर्मचारी लगायतका सबै लागेको कारण नै पुजी बजार बढेको हो। एनआरएन लगायत विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले समेत लगानी गर्ने वातावरण बढ्दै छ।
विदेशमा बसेका नेपालीले पनि आफ्नै नाममा लगानी गर्न पाए पछि काम गर्दागर्दै केही समय फुर्सद पाउने बित्तिकै सेयरमा लगानी गरी हाल्छन्। यसो गर्दा उनीहरूको पैसा हिनामिना पनि हुने भएन।
अहिले नै बैङ्कको व्याज बढ्ने सम्भावना छैन। अहिले लगानी कर्ताले ९ महिनाको व्याज तिरी सकेका छन्। अब ३ महिनाको व्याज तिर्ने हो भने त हामीले पाकेको रोटी खाने हो, बालीनाली भित्र्याउने हो।
त्यस कारण पनि लगानीकर्तालाई फाइदा छ। र बैकमा विकास खर्च गर्न नै बाँकी छ। त्यसैले ब्याजदर घट्ने सम्मको कुरा आइरहेको छ। त्यसैले यो समय सबै सूचकले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न उपयुक्त देखाएको छ।
अहिले नव प्रवेशीलाई जहाँ पायो त्यही लगानी भने गर्नु भएन। आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र लगानी ग¥यो भने राम्रो प्रतिफल पाइने देखिन्छ।
नयाँ लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने
अग्रज लगानीकर्ताले शेयर बजारको धेरै उतार चढाव भोगिसकेकोले उनीहरूसँग सल्लाह गर्नु एकदमै राम्रो हो। अहिले बजारमा सल्लाह दिने पनि धेरै छन्।
उनीहरूलाई फोनबाटै सल्लाह लिन पनि सकिन्छ। एक भन्दा धेरैसँग सल्लाह लिए पछि आफ्नो मनमा लागे पछि मात्रै लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ।
लगानी गर्दा तीन वटा आइमा ध्यान दिनु पर्छ, इन्फरमेसन लिने, इन्टर्याक्सन गर्ने अनि मात्रै इन्भेष्ट गर्ने। यो सेयर बजारको मन्त्र नै हो।
बोनस दिने, हरेक वर्ष राम्रो मुनाफा कमाउने कम्पनीमा गरेको ६० प्रतिशत पैसाले भविष्यमा राम्रो मुनाफा दिन सक्छन्। अहिले राम्रो कम्पनीहरूमा नविल, एनआइसी, प्रभु लगायतका बैक हुन्। उनीहरूले राम्रो बोनस दिइरहेका छन्।
केही लगानीकर्ताहरूले कहिले लगानी गर्दा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। बलियो कम्पनीमा जहिले लगानी गर्दा पनि हुन्छ।
लगानीकर्ताहरूले कहिले सोध्छन् निस्कने समय र भित्रने समय कुन हो भनेर। तर म भन्छु, एक पटक लगानी गरे पछि पुजी बजारबाट निस्कन सक्दैन। वा भनौँ पुजी बजारमा निस्कने र भित्रने समय नै हुँदैन। हो कुनै समयमा कम फाइदा होला र कहिले फाइदा होला।
बजार कहिले घट्छ र कति बेला बढ्छ भनेर भन्न सक्ने कोही छैन।
बजार बढ्छ किन? घट्को लागि ।
बजार घट्छ किन? बढ्नको लागि।
बजार बढ्नु घट्नु नै बजारको ब्युटी र खुबीलीटी हो।
त्यसैमा लगानीकर्ताले कमाउने हो। सधैँ एकैनास भयो भने त बजार चलायमान नै भएन नि।
-नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारसँग उकेराकर्मी सुरेन्द्र बजगाईँले गरेको कुराकानीमा आधारित
२०७८ वैशाख ३० गते १७:१९ मा प्रकाशित